जाजरकोटमा पहिरोले ५ सय परिवार विस्थापित, ९ शव भेटिए ! - Sagarmatha Online News Portal
जाजरकोटमा पहिरोले ५ सय परिवार विस्थापित, ९ शव भेटिए !
जाजरकोट । पहिरोले गाउँ नै बगाउन थालेपछि जाजरकोटको बारेकोटमा ५ सय भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।
घर नजिकैबाट पहिरो जान थालेपछि बारेकोट-४ जिरीका ३२ घर, गोठगाउँका ८ घर, मैनागाउँका ५० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
विस्थापितलाई दुई विद्यालयमा राखिएको बारेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले जानकारी दिए । सिंहका अनुसार ५ सय भन्दा बढी घरधुरी विस्थापित भएर विद्यालय तथा जङ्गलमा बसेका छन् ।
पानी नरोकिएकाले अहिले पनि धेरै घर जोखिममा छन् । बिहीबार राति आएको पहिरोले बारेकोट-४ सार्कीटोलका दुई घर बगाउँदा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । तीन बेपत्ता छन् । बेपत्ताको खोजीकार्य शनिबार बिहानैदेखि जारी रहेको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष सिर्जना बस्नेतले जानकारी दिइन् ।
९ जनाको शव भेटियो !
त्यस्तै कल्पना सार्की, छ वर्षीय सुभाष सार्कीको पनि आज शव फेला परेको छ । बारेकोट-४ का अझै तीन तथा बारेकोट-६ धुमाका २० वर्षीय शान्तबहादुर चलाउने र १० वर्षीय प्रचण्ड चलाउनेलाई स्थानीय एक खोलाले बेपत्ता बनाएकामा अहिलेसम्म शव फेला परेको छैन ।
घाइतेको उद्धार !
त्यस्तै पहिरोमा परी घाइते भएका बारेकोट-४ का लालबहादुर नेपालीलाई पनि सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत लगिएको छ ।
विस्थापितलाई खानाको अभाव !